people Nepal » आँखाको थकान, टाउको दुखाई र अनुहारमा चाउरी पर्न नदिनको लागि के गर्ने ? ‘फेस’ योग (तरिका सहित) आँखाको थकान, टाउको दुखाई र अनुहारमा चाउरी पर्न नदिनको लागि के गर्ने ? ‘फेस’ योग (तरिका सहित) – people Nepal
आँखाको थकान, टाउको दुखाई र अनुहारमा चाउरी पर्न नदिनको लागि के गर्ने ? ‘फेस’ योग (तरिका सहित)
अनुहारको चाउरीपनाबाट या चमक आएन भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? उसो भए तपाईंका लागि ‘फेस योग’ अर्थात् अनुहारको योगासन तयार छ । बेलायतमा फेस योगका लागि चर्चित डानियला कोलिन्स र जुलिया अनास्तास्युले यसको प्रयोग सुरु गरेका छन् । उनीहरु बेलायतका ‘फेस योग सुपरट्रेनर’ हुन्।
एक घन्टाको ६५ पाउन्ड लिएर आफूले सिकाउने २५ मिनेटको कार्यक्रमले अनुहारलाई सदाका लागि परिवर्तन गर्ने दाबी जुलियाको छ । उनीहरुको दाबी छ, ‘यो योगाले चाउरीपना हटाएर अनुहारलाई मुलायम बनाउँछ र स्वस्थ चमक ल्याउँछ । यसका साथै यसले आँखाको थकान र टाउको दुखाई पनि हटाउँछ।’
अनुहारको योग हप्तामा ६ दिन गर्ने हिसाबले तयार पारिएको छ र सातौं दिनमा मात्र रिजल्ट आउने दाबी जुलियाको छ । अनुहार योगाले अनुहारलाई ५ वर्ष घटाउने दाबी पनि गरिएको छ ।
यसअनुसार विभिन्न १८ प्रकारका फेसियल पोजहरु गर्न किन्छ । उदाहरणका लागि गाडीको जाममा परेका बेला मुखमा चारैतिर जिब्रो नचाएर ‘टङ ट्वीस्टर’ योगा गर्न सकिन्छ भने बाथरुममा बसेर ‘जिराफ’ योगा पनि गर्न सकिन्छ । जुलियाका अनुसार यसको सिद्धान्त के हो भने विशेष प्रकारका गतिविधिमार्फत् अनुहारका मांसपेशी सही हिसाबमा आउछन् । यसबाट कोलाजन र प्रोटीन तत्वहरु उत्पादन हुन्छन्, जसले छाला लचिलो हुन्छ र युवा अनुभूति दिन्छ ।
यसअनुसार दुवै आँखालाई समेट्दै (चित्रमाजस्तै) आंैलाले अंग्रेजी अक्षरको सी आकार बनाइ घुमाउनुपर्छ । निधारमा आराम महसुस गर्दै आँखा खुला राख्नुपर्छ । यो प्रक्रिया ३ पटक गर्नुपर्छ । एकपटकमा १० सेकेन्ड औंला घुमाउनुपर्छ।
औंलालो अंग्रेजी अक्षरको भी आकार बनाई आँखीभौंको दुवैतिर औंला राख्नुपर्छ र शक्तिशाली हेराई बनाउनुपर्छ । यस्तो प्रक्रिया ६ पटक गर्नसकिन्छ । प्रक्रिया सकिएपछि १० सेकेन्ड आँखा चिम्लिएर रिल्याक्स महसुस गर्नुपर्छ।
आँखाको चारैतिर गोलो घेरा बनाएर औंला घुमाउनुपर्छ । एकपटक दायाँतिरबाट अर्कोपटक बायाँतिरबाट घेरा बनाएर घुमाउनुपर्छ । यस्तो प्रक्रिया ४ पटक गर्न सकिन्छ।
गाला फुलाएर बिस्तारै हातले हान्नुपर्छ । हातले ३० सेकेन्डसम्म हान्न सकिन्छ।
टाउको अलिकता बंग्याएर पछाडि लैजाने र फेरि तल झार्ने प्रक्रिया गर्न सकिन्छ । यो प्रक्रिया दुईपटक गर्न सकिन्छ।
एउटा गाला ठूलो बनाउने र त्यसमा जम्मा भएको श्वास अर्को गालामा पठाउने प्रक्रिया हो । यसरी हावा पठाउने प्रक्रिया ३० सेकेन्डसम्म गर्न सकिन्छ।
बंगारालाई बाहिरैबाट समातेर कानतिर बिस्तारै तान्न सकिन्छ । यो प्रक्रिया ३ पटक गर्न सकिन्छ।
आकासतिर चुम्बन गर्ने प्रक्रिया हो, यो १० पटक गरिन्छ ।
अनुहारको सबैभाग समेट्ने गरी हातले समाई बिस्तारै मालिस गर्नुपर्छ । यो अवस्थामा आँखा बन्द गर्न सकिन्छ ।